Evanjely Masin'i Jesoa-kristy Nosoratan'i Md. Lioka - Ny Baiboly
Toko 1 Sasin-teny - Ny hahaterahan'i Joany Batista - Ny hahaterahan'ny Mpamonjy - Ny namangian'i Maria an'i Elizabeta - Ny nahaterahan'i Joany Batista.
Toko 2 Ny nahaterahan'i Jesoa tao Betlehema - Ny nankanesan'ny mpiandry ondry tany aminy - Ny nandiovan'i Maria tena - Jesoa efa 12 taona, tao an-tempoly.
Toko 3 Ny toritenin'i Joany Batista - Ny nananarany ny vahoaka sy ny poblikàna ary ny miaramila - Ny nanambarany an'i Jesoa-Kristy - Ny nanaovan'i Joany batemy an'i Jesoa - Ny razan'i Jesoa-Kristy.
Toko 4 Ny nakan'ny demony fanahy an'i Jesoa - Jesoa tsy voahaja tao Nazareta - Demony voaroaka sy marary maro sitrana.
Toko 5 Ny nampahazoan'i Jesoa hazandrano betsaka an'i Piera - Ny nanasitranany an'ilay boka sy ilay lehilahy malemy - Ny niantsoany an'i Matio - Ny amin'ny fifadiana.
Toko 6 Ny mpianatra nioty salohim-bary - Ilay maty tànana - Izy roa ambin'ny folo lahy - Olona maro sitrana - Ilay Toriteny tany an-tendrombohitra - Izay sambatra - Izay hahita loza - Ny tena fitiavana namana - Ny tena fahendrena.
Toko 7 Ny ankizilahin'ilay kapiteny - Ny zanakalahin'ilay mpitondratena tany Naima - Ny mpianatr'i Joany tany amin'i Jesoa - Ilay vehivavy mpanota tao an-tranon'i Simona Farisiana.
Toko 8 Ny voa nafafy - Ny jiro - Iza no renin'i Jesoa sy rahalahiny? - Ny nampitoniany ny ranomasina - Ny nandroahany demony betsaka ho any amin'ny kisoa - Ny zanakavavin'i Jaïra - Ilay vehivavy nitsi-drà.
Toko 9 Ny nanirahan'i Jesoa ny Apostoly - Ny fisalasalan'i Heroda - Ny nampitomboan'i Jesoa ny mofo dimy - Ny nieken'i Piera an'i Jesoa ho Kristy - Ny niovan'i Jesoa tarehy - Ny Samaritana tsy nandray an'i Jesoa.
Toko 10 Ny mpianatra 72 lahy - Ny nientanan'i Jesoa tamin'ny Fanahy Masina - Ilay Samaritana tsara fanahy - Marta sy Maria.
Toko 11 Ny nampianaran'i Jesoa-Kristy ny mpianany hivavaka - Ilay demony moana - Ny taranaka ratsy - Ny faharatsian'ny Farisiana.
Toko 12 Andriamanitra ihany no tsy maintsy hatahorana - Zava-poana ny haren'ny tany - Ny tsy fanahiana izay ilaina - Ny mpanompo miambina - Ny mpitandri-pananana mahatoky - Ny hisarahan'ny olona hevitra ny amin'i Jesoa - Ny famantarana ny fotoana.
Toko 13 Ilaina ny fibebahana - Ny aviavy tsy mamoa - Ilay vehivavy tsy nahatraka sitrana tamin'ny andro sabata - Ny voan-tsinapy - Ny lalivay - Ny varavarana ety - Jerosalema mpamono ny mpaminany.
Toko 14 Ilay lehilahy manirano - Ny amin'ny fanetren-tena - Ireo nasaina miala tsiny - Ny fahafoizana izay rehetra ananana.
Toko 15 Ny ondry very sy ny dragma very - Ilay zanaka mpandany.
Toko 16 Ilay mpitandrina tsy marina - Ilay mpanan-karena sy Lazara.
Toko 17 Ny fanafintohinana - Ny famelana ny namana - Ny finoana - Ny fanetren-tena - Ny boka folo lahy - Ny hahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny andron'ny Zanak'olona.
Toko 18 Ilay mpitondratena nanao lemozy tamin'ny mpitsara - Ny Farisiana sy ny poblikàna - Ny zazakely - Ilay mpanan-karena tsy nanaraka an'i Jesoa - Ny nilazan'i Jesoa ny fijaliany - Ilay jamba tao Jerikao.
Toko 19 Jesoa tao amin'i Zake - Ny fanoharana ny amin'ny mina folo - Ny niakaran'i Jesoa tany Jerosalema - Ny nitomaniany an'i Jerosalema - Ny nandroahany ny mpivarotra tao an-tempoly.
Toko 20 Resy lahatra ny Farisiana - Ireo mpiasa tanimboaloboka ratsy fanahy - Ny fandoavan-ketra ho an'i Sezara - Ny hitsanganan'ny maty - Sady zanak'i Davida no tompony ny Kristy.
Toko 21 Ny rakitr'ilay mpitondratena - Ny handravana ny tempoly sy ny tanàna masina - Ny hahatongavan'ny Zanak'olona.
Toko 22 Ny faneken'i Jodasy hamadika ny Tompo - Ny namoronan'i Jesoa ny Eokaristia - Jesoa tao Getsemany - Jesoa tao amin'i Kaïfa - Ny nandavan'i Piera azy.
Toko 23 Ny nitondrana an'i Jesoa tany amin'i Pilaty - Ny nanesoan'i Heroda azy - Jesoa sy Barabasy - Ny nanamelohana azy hofantsihana - Ny nilanjan'i Jesoa ny hazo fijaliana - Ny namantsihana azy - Ny nialan'i Jesoa aina - Ny nandevenana azy.
Toko 24 Ny vehivavy sy Piera teo amin'ny fasana - Ireo mpianatra roalahy nankany Emaosy - Ny nisehoan'i Jesoa tamin'ny Apostoly - Ny hafatra farany - Ny niakarany ho any an-danitra.
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0068 seconds